Burmese taste - Iora: ထမင်းဘူးများ (၂ )
Posted by Iora at 8:45 PM
Ma Tint June 9, 2016 at 3:09 AM
တစ်ဝကြီးကြည့်ပြီး တစ်ဝကြီးအာရုံခံသွားတယ် အိုင်အိုရာရေ။ လွယ်ကူတဲ့ခရမ်းချဉ်သီးချက်တော့ သားတို့ဖေကြီး ကြိုက်နှစ်သက်လို့ အမြဲလိုလိုဟင်းတစ်ခွက်အနေနဲ့ပါတယ်။ ငြုပ်သီးစိမ်းလေးထောင်းထည့် ငါးခူလေးဖြစ်စေ ငါးကျည်းလေးဖြစ်စေ ပြုတ်အသားနွှင်ထည့် နံနံပင်လေးအုပ် ^_^
Iora June 9, 2016 at 2:50 PM
တီတင့်ပြောတာနဲ့ စားချင်လာပြီ။ အရင်နှစ်ပါတ်ကချက်စားတယ်။ ဒီအပါတ်ငပိရည်ဖျော်စားတယ်။ ငါးငပိချက်လည်းအကြိုက်ဘဲ။
မီးမီးငယ် June 9, 2016 at 6:18 AM
Iora June 9, 2016 at 2:56 PM
အနှစ်ပါမှထမင်းစားတတ်တဲ့ ကိုယ့်ချစ်ချစ်က အဲဒါကျ ဟက်ဟက်ပက်ပက်မစားဘူး။
ကိုယ်က ပဲပုပ်ဆို ဘယ်လိုလုပ်လုပ်ကြိုက်တယ်။ သူက ရှမ်းထမင်းချဉ်နဲ့ က လွဲရင် မစားဘူး။
Thet Nandar May 23, 2019 at 4:53 PM
I miss the old Blogging. Many bloggers that have stopped over the years or primarily use Facebook now. My favorite bloggers retired from the blogging world. Maybe I should retire, too. I miss the fun in blogging. I remember way back in 2010. :'( So Sad!